China L-Leucine CAS 61-90-5 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy ny Tahiry Parma (USP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: L-Leucine
L-Leucine (Abuated Leu) dia iray amin'ireo asidra amine 18 iraisana, ary iray amin'ireo asidra amine tena ilaina valo ao amin'ny vatan'olombelona. Izy io dia antsoina hoe asidra amine branched chain (BCAA) miaraka amin'i L-Isoleucine sy L-Valine miaraka satria izy rehetra dia misy rojom-by methyl ao amin'ny rafitry ny molekiola.
Amin'ny maha asidra amine tena ilaina azy, dia azo ampiasaina ho famenon-tsakafo izy io ary matetika ampiasaina amin'ny vokatra mofo sy mofo. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fanomanana vahaolana asidra amine, mampihena ny glucose amin'ny ra. Ankoatr'izay, izy io dia azo ampiasaina hampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry.
Ny leucine dia azo ampiasaina ho famenon-tsakafo, zava-manitra ary zava-manitra manitra. Izy io dia azo ampiasaina hanomanana ny fampidiran-dra ny asidra amine sy ny tsindrona asidra amine synthesized, ny mpitsabo hypoglycemie ary ny mpandraharaha fampiroboroboana ny zavamaniry.
Ny asan'ny Leucine dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny isoleucine sy valine hanamboarana ny hozatra, hifehezana glucose amin'ny ra ary hanome tanjaka ny vatana. Izy io koa dia afaka manatsara ny fivoaran'ny hormonina mitombo, manampy amin'ny fandoroana tavy visceral; io tavy io dia ao anaty ny vatana ary tsy azo lanina amin'ny alàlan'ny sakafo sy fanatanjahan-tena fotsiny.
Ny leucine, isoleucine, ary valine dia asidra amine amine misy sampana, izay mampiroborobo ny fanarenana ny hozatra aorian'ny fiofanana. Ny leucine no asidra amine amndrena misy tsiranoka mandaitra indrindra izay afaka misoroka tsara ny fahaverezan'ny hozatra satria azo vahana haingana sy miova ho glucose. Ny fanampiana glucose dia mety hisorohana ny fahasimban'ny sela hozatra, noho izany dia tena mendrika ny bodybuilder izy io. Ny leucine koa dia manatsara ny fanasitranana ny taolana, ny hoditra ary ny hozatra manimba ny hozatra, ka matetika ny dokotera no manome torohevitra ny fametahana leucine aorian'ny fandidiana.
Ny loharanon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny leucine dia ny vary mena, tsaramaso, hena, voanjo, sakafo soja, ary voamaina. Satria karazana asidra amine tena ilaina izy io, midika izany fa tsy ny olombelona mihitsy no mamokatra azy io ary amin'ny sakafo ihany no ahazoana azy. Ny olona manao hetsika ara-batana matanjaka be ary mahazo fihinana proteinina ambany dia tokony handinika ny famenoana leucine. Na dia afaka mampihatra endrika famenon-tena tsy miankina aza dia aleony ampiana miaraka isoleucine sy valine. Noho izany dia mora kokoa ny famenon-tsakafo mifangaro.
≤1000cfu / h
Previous: Glycine CAS 56-40-6 ho an'ny sokajy Pharma (USP / EP / BP)
Manaraka: L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ho an'ny sokajy parma (USP)
Farm kilasy L-Leucine, Sakafo biby, L-Threonine Pharm, 73-32-5 L-Isoleucine, Kilasy Sakafo L-Threonine, L-Valine 72-18-4,